अन्तर्राष्ट्रिय कत्थक नर्तकी पूर्णिमा खड़काद्वारा पारपाचुकेको अर्जी - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारअन्तर्राष्ट्रिय कत्थक नर्तकी पूर्णिमा खड़काद्वारा पारपाचुकेको अर्जी
अन्तर्राष्ट्रिय कत्थक नर्तकी पूर्णिमा खड़काद्वारा पारपाचुकेको अर्जी
February 24, 2020 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
भावनात्मक कुराको उठान गरेर अर्काको छवि धमिल्याउने काम आजकल साधारण भएको छ – रघुवीर यादव
मुम्बई – आफ्नो वैवाहिक जीवनको 32 वर्ष पुरा गर्ने कलाकार पूर्णिमा खड़काले पति रघुवीर यादवविरुद्ध छुटानामको अर्जी गरेकी छिन्। मुम्बईाको बान्द्रास्थित कुटुम्ब अदालतमा उनले यसै साता गरेकी अर्जीले बलिउडको दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै चर्चित पारिवारिक मामिला भनेर चिनिने यादव-खड़का मुद्दा फेरि एकपल्ट चर्चामा आएको छ। उनले आफ्नो याचिकामा बलिउड अभिनेता तथा आफ्ना पति रघुवीर यादवविरुद्ध व्यभिचार अनि परित्यागको आरोप लगाएकी छिन्।
राष्ट्रिय पुरस्कारले विभूषित दार्जीलिङकी छोरी पूर्णिमा खड़काले आफ्नो याचिकामा रु. 1 लाखको अन्तरिम राहत अनि अन्तिम निर्वाह राशीको रुपमा 10 करोड़को माग गरेकी छिन्। खड़काको पक्षबाट गरिएको याचिकामा रघुवीर यादवकी साथी अनि प्रबन्धक रोशनी अर्चेजालाई पनि एक पार्टी बनाइएको जानकारी यहाँका पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गरेका छन्। उल्लेखनीय छ, रघुवीर यादव अनि पूर्णिमा खड़काका एक 30 वर्षीय छोरा छन् जो आफ्नी आमासितै बस्छन्।
हालमा 60 वर्ष पुग्न लागिरहेकी पूर्णिमा खड़कालाई अन्तर्राष्ट्रिय कत्थक नर्तकका रुपमा सबैले चिन्छन् भने 70 वर्षीय यादव बलिउडका प्रसिद्ध अभिनेताका रुपमा परिचित छन्। 1988 -मा विवाहभएपछि यी दुइको पारिवारिक जीवनमा 1995 -देखि खटपट सुरू भएको बताइन्छ। बलिउडमा यी दुइको वैवाहिक जीवनलाई सबैभन्दा तितो सम्बन्ध भनेर यहाँका मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्।
पूर्णिमाले बताएअनुसार रघुवीर यादवले फिल्म संसारमा सङ्घर्ष गरेर आफुलाई स्थापना गर्ने कोसिस गरिरहेको समय उनले आफ्ना पतिको भविष्यको लागि आफ्नो जीविका र रुचीलाई तिलाञ्जली दिएर सघाएकी थिइन्। तर बिस्तारै प्रसिद्धि र उपलब्धि प्राप्त गर्नथालेपछि दुधमुखे बालखा छोरा हुँदाहुँदै यादव पूर्णिमालाई त्यागेर अर्की युवतीसित आकृष्ट बन्न थालेको उनी दाबी गर्छिन्। खड़काले यादवविरुद्ध हिन्दू विवाह ऐनको धारा 13(1) (सानो आई) अनि 13 (सानो आई-ए) -अन्तर्गत आफ्ना कानुनी सहायक इसिका तोलानी अनि त्युबा खानमार्फत् मुद्दा दर्ता गरेकी छिन्। आफ्नो याचिकामा पूर्णिमाले बताएकी छिन्, अस्सीको दशकको सुरूमा मैले कत्थक नाचको प्रदर्शनी गर्दै संसार घुमेँ, मैले प्रख्यात नर्तक विरजु महाराजबाट तालिम पनि ग्रहण गरेँ। यसैबिच नेसनल स्कुल अफ ड्रामामा मेरो भेट रघुवीरसित भयो अनि6महिनाको सम्बन्धपछि हाम्रो बिहे जबलपुरमा सम्पन्न भयो। विवाह अपर्झट अवस्थामा भएको कारण आफुसित कुनै निमन्त्रणा पत्र नरहेको बताउँदै उनले तर फोटोग्राफहरू भने उपलब्ध रहेको जनाएकी छिन्। सुरुबुरु चलिरहेको वैवाहिक जीवनमा तर पूर्णिमालाई रघुवीरको विवाहोत्तर सम्बन्ध उनकै सह-अभिनेत्रीसित बढ़्न लागेको शङ्का हुनथाल्यो। यसैबिच रघुवीर स्वयमले मध्यप्रदेशमा छुटानामको मुद्दा दर्ता गरे जो पछि दिल्लीको अदालतमा स्थानान्तरण गरिएको थियो किनभने पूर्णिमा त्यतिखेर दिल्लीमै बस्दथिइन्। यद्यपि सो मुद्दा केही सालपछि फिर्ता लिइएको थियो।
हालमा रघुवीर यादवबाट प्रत्येक महिना रु. 40 हजारको क्षतिपुरण राशी पाइरहेकी भए पनि त्यो रकम समयमा नपाइने गरेको अनि मासिक तिरोबाट बाँच्नका लागि रघुवीरले आफ्ना सम्पत्तीहरू अहिले रोशनीको नाममा सार्नथालेको पूर्णिमाले आरोप लगाएकी छिन्।
टिभी धारावाहिक बनेगी अपनी बात -मा काम गरेकी रोशनीले मिडियासित आमुसामु बात गर्न हिच्किचाए पनि रघुवीर यादवले भने आफुमा भारतको संविधानप्रति विश्वास रहेको अनि आजकल यस्ता भावनात्मक कुराहरू चर्चामा ल्याएर कसैको ख्याती अनि व्यक्तित्व धमिल्याउने काम हुनेगरेको बताउँदै मुद्दा न्यायालयाधीन रहेको कारण यसबारे धेर टिप्पणी नगर्ने बताएका छन्।
ज्ञातव्य छ, रघुवीर यादवले 80 -को दशकमा प्रकाश झाको धारावाहिक मुङ्गेरी लाल के हसीं सपने –मा काम गरेर सबैको मन जितेका थिए भने उनले अभिनय गरेका लगान, पिपली लाइभ जस्ता आठवटा फिल्महरू भारतबाट आधिकारिक रुपमा ओस्कार पुरस्कारको प्रतिस्पर्द्धामा नामाङ्कित भइसकेका छन्। अर्कोतिर कत्थक नृत्यकलाको माध्यमद्वारा सारा संसारमा ख्याति आर्जन गरिसकेकी पूर्णिमा राष्ट्रिय पुरस्कारहरूले विभूषित भइसकेकी छिन्। दार्जीलिङको एक सम्भ्रान्त परिवारसित सम्बन्ध राख्ने पूर्णिमा खड़काको नाउँसुवास पहाड़ी भेकमा खुबै चलेको छ।
बबिता मादेन-को ‘प्रश्नको कठघरामा भागोप’ –माथि प्रश्न
मोदी राम, ममता सिता र दार्जीलिङ लङ्का : कठपुतलीहरू नाचिरहेछन्